२०७९ असार १४ मंगलवार
कृषि र अर्थ
बिकास र पुर्बाधार
बिचार र ब्लग
शिक्षा र स्वास्थ्य
स्वास्थ्य / खानपिन
स्वास्थ्य / जिवनशैली
पानी कम पिउनुहुन्छ ? त्यसो भए यो अवस्य पढ्नुहोस !
किड्नी अर्थात मृगौला शरीरको निक्कै महत्वपूर्ण अंग मध्ये एक हो । यसले शरीरमा रगत सफा गर्ने देखि, हार्मोन बनाउने, खनिज सोक्ने, मुत्र उत्पादन गर्ने, टक्सिन अर्थात खराव पदार्थहरुलाई शरीरबाट निकाल्ने तथा एसिडको सन्तुलन बनाउने जस्ता काम गर्छ । यहाँ हामीले दैनिक जीवनमा गर्ने १० गल्तीको चर्चा गरिएको छ जसले मृगौलालाई हानी पु¥र्‍याउँछ ।
१. पानी कम पिउने : यदि तपाइँ नियमित पानी पिउने गर्नु हुन्न भने यसको सबै भन्दा पहिलो र खराव प्रभाव मृगौलामा पर्छ । पानीको अभावले गर्दा मृगौलाले रगत सफा गरेर फोहोर फ्याँक्न कठिन हुन्छ । यसले उल्टो परिणाम दिन्छ शरीरमा टक्सिन जम्मा हुन्छ ।
२ नून बढी
खानामा चर्को नून खाने बानी छ भने यसले रक्त चाप बढाउँछ । यसले मृगौलामा दवाव पैदा गर्छ । तपाँइले दिनमा ५ ग्राम भन्दा बढी नून खानु हानिकारक छ ।
३ पिसाव रोक्ने : यदि पिसाव आउँदा पनि पछि जाउँला भनेर बस्ने बानी छ भने आजै देखि बानी सुधार्नुस् । पिसाव रोक्ने बानीले मृगौलामा पत्थरी हुने र मृगौला फेल नै हुने खतरा समेत पैदा गर्छ ।
४ गुलियो खाने बानी : यदि गुलिया खानेकुरा धेरै बानी छ भने आजै देखि छोड्नुस् । गुलियो बढी खाँदा यसले शरीरमा प्रोटीनको मात्रा बढी भएर मृगौलामा समस्या हुन्छ ।
५ पोषणको अभाव : शरीरमा पोषक तत्वको अभाव भो भने मृगौला खराव हुन्छ । भिटामिन-ट र म्याग्नेशियम भरपुर खानाले मृगौलामा पत्थरी हुन दिँदैन ।
६ मासु बढी खाने : मासुको पारखी हुनुहुन्छ र बढी नै मासु खाने बानी छ भने पनि तपाइँको मृगौला समस्यामा छ । मांसाहारले शरीरको पाचन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्छ जसले मृगौलामा सोझै असर गर्छ ।
७ अनिद्रा : रातिमा निद्रा नलाग्ने वा धेरै जागा बस्ने बानी पनि मृगौलाका लागि घातक छ । यसले मृगौला सम्बन्धि विभिन्न रोग ल्याउन सक्छ । निद्राले मृगौलालाई स्वस्थ राख्न सघाउँछ ।
८ चिया कफी बढी सेवन : चिया कफी अत्याधिक मात्रामा पिउँदा पनि मृगौलामा समस्या हुन्छ । चिया कफीले शरीरमा क्याफिनको मात्रा बढाउँछ जसले मृगौलामा भार पर्छ ।
९ पेनकिलर सेवन : टाउको दुख्ने वित्तिकै वा सामान्य दुखाइ कम गर्न पनि गोली खाने बानी छ भने आजै देखि छोड्नुस् । धेरै पेनकिलरको सेवनले तपाइँको मृगौलामा प्रभाव पार्छ ।
१० जाँड रक्सी : अल्कोहल अर्थात जाँड रक्सीको अत्याधिक सेवनले पनि मृगौला समस्यामा पर्छ । यसले मृगौला फेल हुने अत्याधिक सम्भावना हुन्छ ।
२०७७ फाल्गुन ७, शुक्रबार ०५:४६ गते 1 Minute 823 Views
मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला भन्नुहुन्छ : सुत्न नजान्दा पनि हृद’यघा’त र सुगर, प्रेसर हुन्छ ।
यदि यी लक्षण भए तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला अन्यथा ज्या’न जान सक्छ ।
गाउँघरमा पाइने असुरोका यस्ता छन औ’षधीय गुण, यी रोगका लागि यसरी गर्नुहोस् प्रयोग ।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
भाईरल वडा अध्यक्षका उम्मेदवार १०० मतले विजयी
अष्ट्रेलिया जानेबीच बढ्यो डिभोर्स र आत्मह-त्या !
भारतले रोकिदियो नेपाल आउने कोइला !
बधाई ! २१ वर्षमै तीन ओटा विश्व रेकर्ड कायम !
उपराष्ट्रपति भन्नुहुन्छ – शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा धनी र गरिबका बीचमा हुने विभेद अन्त्य हुनुपर्छ ।
प्रकाश सपुतलाई माओ‌वादी विद्यार्थी नेताको चेता’वनी- तपाईँको हर्कत हसेर बस्दैनौं ।
द्वारा संचालित नेपाली भाषा मा प्रकाशित हुने डिजिटल अनलाइन पत्रिका हो। हाल यस साइट परिक्षणको क्रममा रहेको छ । सम्बन्धित निकायबाट अनुमती लिए पश्चात हामी यहाहरुलाई हर पल ताजा समाचार उपलब्ध गराउने छौ ।
सह सम्पादक :
कानुनी सल्लाहकार :
बरीष्ट सल्लाहकार :
सहायक सम्पादक :
नेपाल खबर अन्लाईन
Copyright © 2022, सार्बधिक सुरक्षित. | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा
Site by ToolsNp